Jurgen Klopp Iyo Liverpool Oo Helay War Ay Ka Cadhoodaan Kadib Markii Sadio Mane Lagu Soo Daray Liiska Xulka Qarankiisa Senegal Ee Kulamada Caalamiga Ah Ee Soo Socda. – WWW.Gool24.net
Jurgen Klopp Iyo Liverpool Oo Helay War Ay Ka Cadhoodaan Kadib Markii Sadio Mane Lagu Soo Daray Liiska Xulka Qarankiisa Senegal Ee Kulamada Caalamiga Ah Ee Soo Socda.
18/10/2017 Mahamoud Batalaale
Kooxda Liverpool ayaa helaysa war ayna jeclaysan doonin iyada oo tababaraha xulka qaranka Senegal ee Aliou Cisse uu xaqiijiyay in Sadio Mane uu diyaar u noqon doono kulamada caalamiga ah ee soo socda ee koobka aduunka loogu soo baxayo isaga oo waliba doonaya Mane oo uu safto kulanka ku celiska ah ee ay FIFA amartay in South Africa iyo Senegal ay wada ciyaaraan kulan hore loo ciyaaray oo uu garsoore qalad wayn ka sameeyay.
Sadio Mane ayuu dhaawac ku soo gaadhay waajibaadka xulka qarankiisa Senegal intii lagu jiray kulamadii caalamiga ahaa ee dhawaan laga soo laabtay wuxuuna haddaba seegay kulankii Premier Leaque ee ay Liverpool barbaraha la gashay Manchester United iyo waliba kulankii Champions Leaque ee ay Reds 7-0 ku soo xasuuqday kooxda Maribor.
Iyada oo aan wali la ogayn waqtiga rasmiga ah ee uu Sadio Mane garoomada ku soo laaban doono ayuu macalinka xulka qaranka Senegal ee Aliou Cisse uu shaaca ka qaaday in Mane uu boqolkiiba boqol uu taam u noqon doono kulamada ay la ciyaari doonaan South Africa.
Kulankii South Africa iyo Senegal oo ay hore Senegal guuldaro u soo gaadhay ayay FIFA qasab ka dhigtay in markale la ciyaaro kadib markii uu garsoore ree Ghana ahi shaqadiisa abid ee garsooranimo ku waayay markii uu South Africa siiyay rekoodhe been ahaa taas oo keentay in Senegal ay hesho cadaalad ay markale ku ciyaari karto.
Xulka qaranka Senegal ayaa u baahan in ay laba dhibcood oo kaliya ka shaqaystaan kulamada soo socda si ay koobka aduunka ugu soo bixi karaan markii labaad oo kaliya waxayna hore uga qayb galeen koobkii aduunka ee 2002 kii markaas oo ay aduunka si fiican isku bareen.
Macalinka Senegal ee Aliou Cisse oo ka hadlayay Sadio Mane ayaa yidhi: “Maskaxdayda waxaa ku jira in aanu wax shaki ahi ku jirin in uu isagu nala joogi doono labada kulan ee South Africa isla amrkaana uu boqolkiiba boqol taam buuxa ahaan doono. Ilaa hadda waxa uu samaynayaa tababar shaqsi ah, wuuna ordayaa, laakiin laga bilaabo usbuuca soo socda waxa uu doonayaa in uu si adag tababarka u qaato oo uu bilaabo in uu kubbada ku shaqeeyo”.
Hadalkan ayaan ka farxin doonin Jurgen Klopp oo doonaya in Sadio Mane aan wax halis ah la galin isla markaana uu si buuxda oo caadi ah u soo kabsado iyada oo waliba xidiga ree Senegal uu muhiim ka yahay shaxda macalinka ree Germany.
Senegal ayaa hogaaminaysa Group D ee isreeb reebka koobka aduunka waxayna min laba dhibcood ka horeeyaan South Africa iyo Burkino Faso si la mid ah Cape Verde waxayna Senegal ku xisaabtaymayaan kulanka baaqiga u ah ee ay markale la ciyaari doonaan South Africa laakiin in Sadio Mane uu haddaba qayb ka yahay qorshaha qarankiisa ee kulamada November 10 ayaa keenaysa in Liverpool ay isku xumaan karaan.